Vol. 2 DISEMBA, 1905. 3
NGOKUGQIBELA kuqala ikota yesithathu.
I-quaternary yokuqala: ukwazi (aries), ukushukuma (i-taurus), isixhobo (gemini), ukuphefumla (umhlaza), kulele kwihlabathi le-noumenal. I-quaternary yesibini: ubomi (i-leo), ifom (virgo), isini (libra), kunye nomnqweno (nge-scorpio), zizinto iinkqubo ngazo imigaqo ze-nouamanal zehlabathi zibonakaliswa kwihlabathi elibonakalayo lobuhle. Umhlaba obonakalayo obonakalayo ubizwa ngokuba ngumphefumlo kwaye uphela ngokobuqu. I-quaternary yesithathu, eqala ngeengcinga, iqulethe ingcinga (sagittary), ubuntu (capricorn), umphefumlo (aquarius), kunye no (pisces).
Njengoko ubomi sisiqalo senkqubo ekwakhiweni komzimba weemvakalelo zangaphandle, ngokunjalo nengcinga sisiqalo senkqubo ekwakhiweni komzimba weemvakalelo zangaphakathi.
Ukucinga kukungcungcutheka kwengqondo kunye nomnqweno. Ingqondo ngokuphefumla uphefumlela kumzimba ongafakwanga weminqweno emntwini, kwaye umnqweno uphakama njengobunzima obungenakubumba, udibanisa nomphefumlo, unikwe ifom kwaye ube ucinga.
Iingcamango zingena emzimbeni kuphela ngamaziko athile. Umlinganiswa wengcinga unokwaziwa ngomsebenzi weziko ongena ngalo. Inani kunye nokudityaniswa kweengcinga zininzi kwaye zahlukahlukene kunezigidi zezidalwa ezivela kubo, kodwa zonke iingcinga zinokuhlelwa phantsi kweentloko ezine. Ezi zizinto zesini, ezasisiseko, ezinemvakalelo, kunye nengqondo.
Iingcamango zesimo sokwabelana ngesondo zivuselela kwaye zingene ngaphakathi kwelo ziko kwaye, zisebenza kwi-solxus ye-solar kwaye zivuse amalungu omzimba wesisu, ziphakama njengomoya oshushu oya entliziyweni. Ukuba bafumana ukungena apho benyuka njengeefomfashini ezingafaniyo emqaleni kwaye bagqithele bangene entloko apho banikwe khona iifom-zicacile kwaye zahlukile njengoko ukukhula komntu ngamnye kuya kuvumela. Xa umntu esiva kuvuseleleka kwindawo yesondo angazi ukuba kukho impembelelo ethile evela kuye. Ukuba ebeya kugxotha okanye egqwetha ingcinga makala ukwala isohlwayo xa ebuza
Ngaphezulu kukukhanya, ngaphantsi bubomi. Kwakhona i-odolo iyatshintsha, kwaye ngoku, ngokucinga okulangazelelayo, ezi zibonakalayo zehlabathi zobomi kunye nefom, isini kunye nomnqweno, kwaye ucinga ngokwakho, kutshintshwa yi-alchemy kukhanya. I-ZODIAC. Ukungena entliziyweni, kunye nokuziva entliziyweni ukuthanda umntu onguye Ngaphakathi umzimba, okanye ngokuguqula ingcinga ukuba ibe nolwazi oluphezulu kakhulu akwaziyo ukufikelela nokulucela ukuba lubekho. Imvakalelo iya kudlulela kwenye yesifiso kunye nokuphakanyiswa, emva koko uxolo. Kulula kakhulu ukudlulisela ingcinga kunokuyigxotha. Akukho ngcinga inokubulawa ngaxeshanye njengoko kunjalo ngamanye amaxesha ngokukholelwa ngempazamo. Ingagxothwa kude kodwa iya kubuyela ngokomthetho we-cyclic. Kodwa ukuba ayaliwe ukondla ngexesha ngalinye ebuyayo iya kuphuma amandla kwaye ekugqibeleni iphele.
Iingcamango zento yendalo zingena emzimbeni ngokusebenzisa inkaba kunye neepores zolusu. Iingcinga ezisisiseko zezi zomsindo, intiyo, ubugqwetha, umona, inkanuko, indlala kunye nokunxanelwa, kunye nezo zivuselela izitho zengqondo ezintlanu, ezinje ngobudlakudla, okanye ukubona ukuvutha ngumsindo. Basebenza kwi-solxus ye-solar kwaye bavuselela umthi we-nerve, kunye neengcambu zabo kwiziko lezesondo, kunye namasebe ayo kwi-solar plexus, okanye badlala kuloo mthi we-nerves, ingcambu yawo isengqondweni, ngamasebe ngaphakathi I-solar plexus.
Ezi ngcinga zisisiseko zenziwa kwaye zinikwe amandla zizisu zesisu kwaye ziye phezulu entliziyweni apho, ukuba zifumene isohlwayo, ziphakama ziye entloko, zithathe uhlobo oluthe nkqo kwaye zithunyelwe zisuka kwenye yokuvuleka okunje ngamehlo okanye ngomlomo, ngaphandle koko ziyehla, ziphazamise umzimba kwaye, ngokuchaphazela zonke iiatom zalo, zibangele ukuba ziphendule kwisenzo sabo. Nawuphi na amandla asisiseko okanye ingcinga engendawo ethe yenza ukuba ungene kwinkaba inokutshintshwa ngokusebenzisa ingqondo kwangoko ngengcinga eqinisekileyo yobume obahlukileyo, okanye ngokutshintsha ingcinga ibe luthando lokungazingci njengangaphambili; Ngaphandle koko ingcinga iya kwandiswa nangamandla, inikwe ifom ngokomgangatho womntu wokucinga, kwaye ithunyelwe emhlabeni ukuba isebenze kwabanye abaya kuyivumela.
Iingcamango zesimo seemvakalelo zomntu zingena entliziyweni ngendlela evulekileyo kunye namaziko amabele. Zeziphi iingcinga zeemvakalelo (ngamanye amaxesha ezibizwa ngokuba ziimvakalelo), ezinokuqondwa ngcono ngokujonga ukuthothisa abanye abantu ngokuchasene nokubona ukuphalazwa kwegazi, okanye ukubona intlupheko okanye ukubandezeleka kwabanye xa beziswa ngqo kwinto enjalo, kodwa ulibale. malunga nayo kamsinya nje ukuba kuphele imbonakalo kunye nesandi, emva koko imimoya yenkolo, ubugqi bokuvuselela amandla, inzondelelo yokulwa, uvelwano olungenangqondo, kunye nefuthe lokuhlaselwa ngesiquphe. Ngokweempawu zeemvakalelo zehla zivela entliziyweni ziye kwimimandla esezantsi, okanye ziphakame kwaye zithathe ubume entloko kwaye ziphakanyiselwe phezulu nasekuqiniseni okuphezulu. Zonke iintlobo zeengcinga kunye neempembelelo zifuna ukwamkelwa entlokweni ngenxa yokuba intloko ingummandla wokuqonda apho iifomathi zinikezelwa khona kunye neengcinga ezisebenzayo zivuselelwa, zandisiwe kwaye zixutywe. Intloko ineendawo ezivulekileyo ezisixhenxe: ezimpumlo, umlomo, iindlebe kunye namehlo, wona, ndawonye nolusu, avuma ngokulandelelana izinto ezintlanu ezaziwa ngokuba ngabantu bakudala njengomhlaba, amanzi, umoya, umlilo kunye ne-ether, ehambelana nezixhobo zethu Ukuncwina, ukunambitha, ukuva, ukubona, nokuchukumisa. Izinto kunye nezinto ezisetyenziswayo zisebenza okanye zidlula ezi ziteshi zeengcinga eziqala ukusebenza omnye okanye ngaphezulu kwemisebenzi emihlanu yengqondo. Imisebenzi emihlanu yengqondo isebenza ngokusebenzisa iimvakalelo ezintlanu kunye nezihlanu zengqondo kunye neenkqubo zecala lezinto ezibonakalayo.
Iindidi ezine zeengcinga zivela kwimithombo emibini: iingcinga ezivela ngaphandle kunye neengcinga ezivela ngaphakathi. Kuboniswe ukuba zivela njani iiklasi ezintathu zokuqala ezinamagama ngaphandle, zivuselele amaziko abo kwaye ziphakame ziye entloko. Zonke ezi ngcinga zisebenza njengezinto ezibonakalayo kunye nokutya okungena esiswini ngengqondo kanye njengokuba ukutya okwenyama kuthathwa esiswini. Emva koko ukutya kwengqondo kudlula kwindlela yokugaya efana naleyo yealalary canal, apho yenziwa ngamalungu entloko inemisebenzi encomekayo kwabo bakwindawo yesisu kunye ne-pelvic. I-cerebellum sisisu sengqondo, kunye neekhonkrithi zesidudu esidityanisiweyo apho impahla yokucinga igqitha khona, kwinkqubo yokugaya ukutya kunye noxinzelelo, ngaphambi kokuba ikhutshwe ebunzini, iliso, indlebe, impumlo, okanye umlomo, Yakhelwe emhlabeni ngokupheleleyo, kwinjongo yayo elungileyo okanye embi. Ke iimpembelelo okanye iingcinga ezifunyenwe kumaziko amathathu asezantsi zivela kumthombo wangaphandle kwaye zingasebenza njengokutya kwengqondo ukuba ifake uhlobo.
Ukucinga okuvela ngaphakathi kunemvelaphi yayo entliziyweni okanye entloko. Ukuba entliziyweni, kukukhanya okuqinileyo okungagungqi okukhanyisa uthando olungenazimvakalelo lwazo zonke izinto, kodwa olunokuthi lube luthando lweemvakalelo kwaye kudluliswe kuphendulwa ukukhala kobuntu, ngamabele, ukuba awuphakanyiswanga njengelangatye. umnqweno wentloko. Xa iphakanyisiwe inokuthi iphononongwe, idityaniswe, kwaye ilungelelaniswe sisindululo sendalo iphela esicacisayo esichaza iinkqubo ezintlanu zobungcali ezikhankanyiweyo. Umsebenzi ophindwe kabini wengqondo ngokusebenzisa izinzwa uya kuthi ke uxabiseke kwaye uqondwe. Ifom yokucinga eqala ngaphakathi kwentloko ayinakufane ibizwe njengengcinga njengoko isenziwa ngokupheleleyo ngaphandle kwenkqubo yengqondo. Ngexesha elinye nokubonakala kwayo entlokweni kukho isenzo kuloo mmandla usezantsi komqolo obangela ukuba intloko izaliswe kukukhanya. Kokukhanya kuqondwe indawo engaphakathi yeengcinga. Umthombo wengcinga ovela ngaphakathi yi-ego ye-umntu okanye i-High Self. Ingcinga enjalo inokubizwa ngokuthanda kuphela ngumntu ofumene ukukhanya kunye nobulumko. Kubo bonke abanye iza ngokungalindelekanga, ngokucamngca nzulu, okanye ngokulangazelela okukhulu.
Ukucinga akukho ngqondo; ngumnqweno. Ukucinga yinto yokudityaniswa komnqweno kunye nengqondo. Ngale ndlela banokubizwa ngokuba bengqondo ephantsi. Ukucinga kubangelwa sisenzo somnqweno kwingqondo, okanye kwengqondo kumnqweno. Ingcinga ineendlela ezimbini; into enxulunyaniswa nomnqweno kunye neemvakalelo, yiminqweno yenkanuko, iinkanuko, kunye neminqweno, kunye nento ehambelana nengqondo kwiminqweno yayo.
Kwigumbi lokugqobhoza eliluhlaza okwesibhakabhaka esingenamafu kuvuthuza umoya kwaye kuqhuma imimoya enesingqala sefilm. Ukusuka koku, iifom ziyavela ezonyuka ngobukhulu kwaye ziba nzima kwaye zibe mnyama de isibhakabhaka siphelele kwaye ukukhanya kwelanga kuvaliwe. Imvula enkulu, amafu kunye nezinye iindlela zilahlekile ebumnyameni, zaqhekezwa ngumbane kuphela. Ukuba ubumnyama obuqhubekayo buqhubeka, ukufa kuya kusasazeka emhlabeni. Kodwa ukukhanya kuhleli ngakumbi kunobumnyama, amafu ahlala emvula, ukukhanya kugqobhoza ubumnyama, kwaye imiphumo yesiphango iya kubonakala. Iingcamango zivezwa ngendlela efanayo xa umnqweno uthatha indawo yokunxibelelana nengqondo.
Seli nganye emzimbeni inayo izinto kunye neentsholongwane zokucinga. Iimpawu kunye neengcinga zangaphandle zifunyanwa ngesondo, izinto ezisisiseko kunye neemvakalelo; ivumba, ukunambitheka, izandi, imibala, kunye neemvakalelo (zokuchukumisa), zigqibele zingena emzimbeni ngesango leemvakalelo ngokusebenzisa amaziko emfundo amahlanu; ingqondo iphefumla ngokungxama, kwaye kwangaxeshanye sishukunyiswa kabini kumacala amabini achaseneyo, emzimbeni wonke, kwaye ngaloo ndlela sivusa kwaye sikhulule iintsholongwane zobomi; Umnqweno unika umkhombandlela wobomi obuphakama kunye nentshukumo yevortex ukuya entliziyweni, ufumana ukhuthazo kwindlela yalo njengoko inyuka. Ukuba yingcamango yesiko elithile, inkanuko, okanye umsindo, ongena ekunikezelweni kwentliziyo, umngxunya, umngxunya, ilifu elinjengelifu elizonyukela entloko, unokwenza ukoyikeka kwengqondo kwaye uvale ukukhanya isizathu esivela entliziyweni. Iya kwandula ke isaqhwithi senkanuko, kugqume iingcinga ezothusayo njengokukhanya kombane, kwaye ngelixa isaqhwithi senkanuko ihlale inkanuko yobumfama kufuneka yoyise; ukuba iyaqhubeka isisidenge okanye ukufa sisiphumo. Kodwa njengakwindalo, ubushushu beso saqhwithi sichithiwe kungekudala, kwaye iziphumo zako zinokubonwa ngokukhanya kwesizathu. Umnqweno ofikelela ekungeneni entliziyweni - ukuba ungathanda ukubuka iminqweno yamehlo ungoyiswa- kuphakama ilangatye elinemibala eyahlukeneyo emile okomqala, ukusuka apho ukuya kwi-cerebellum kunye ne-cerebrum apho ifumana zonke izinto zomqondo kuyo iinkqubo zokugaya, ukufunxa, ukuguqulwa, ukukhula kunye nokuzalwa. Iziko le-olodoory liyinika ivumba kunye nokuqina, iziko le-gustatory libangela ukuba lixakwe kwaye likrakra okanye linyibilike kwaye limnandi, iziko lokuphicotha liyayithumela kwinqaku elikrakra okanye elimnandi, iziko elibonakalayo liyinika umfanekiso kwaye liyenze ibe nokukhanya kunye nombala, iziko lokuqonda liyayifaka imvakalelo kunye nenjongo, kwaye emva koko lizalelwe kwihlabathi liphuma kwelinye lamaziko entloko iziko elakhiwe ngokupheleleyo, isiqalekiso okanye intsikelelo eluntwini. Ngumntwana wengqondo kunye neminqweno. Umjikelo wobomi bawo uxhomekeke kumyili wayo. Kuvela kuye ukuxhasa ukutya. Iingcamango ezingalufumani ukondliwa okufanelekileyo ngexesha lenkqubo yokumitha, okanye ezizelwe ngaphambi kwexesha, zifana namathambo egrey, okanye izinto ezingenabomi, ezihamba ngokungagungqiyo de zitsale kwimeko yomntu onomnqweno ongaqinisekanga, wokudlula ngaphakathi ngaphandle kwengqondo yakhe njengesiporho kwindlu engenanto. Kodwa zonke iingcinga ezakhiwe ngengqondo ngabantwana baloo ngqondo, ngubani na oxanduva kubo. Baqokelela ngokwamaqela ngokobunjani babo kwaye bagqibe ngekamva lobomi bomqali wabo. Njengomntwana, ingcinga ibuyela ukondla umzali wakhe. Ukungena kwimozulu yakhe yazisa ubukho bayo ngemvakalelo ehambelana nesimo sayo, kwaye ifuna ingqalelo. Ukuba ingqondo iyala ukonwabisa okanye umamele amabango ayo inyanzelwa ngumthetho wemijikelezo ukuba urhoxe de umjikelo uvumele ukubuya kwawo. Ngalo lonke ixesha liphela amandla kwaye alikho ngokwahlukileyo kwifomu. Kodwa ukuba ingqondo iyamonwabisa umntwana wayo, ihlala ide ihlaziyekile kwaye ihlaziywe kwaye, njengomntwana onqwenela ukwaneliseka, iyakhawuleza ukuya kudibana neqela layo kwimidlalo nokwenza indawo yomfaki-sicelo olandelayo.
Iingcamango ziye zize enye ngokwamaqela, ngamafu. Iimpembelelo ezilawulayo zeqela le-zodiacal, ngokunxulumene nemigaqo esixhenxe ichaza ukufika kweengcinga zakhe, kunye nomjikelezo wokubuya kwawo. Njengokuba ke esondle iingcinga zohlobo oluthile, ekubuyeni kwabo ebomini emva kobomi, ngokunjalo ke ubomele ngokwaneleyo, kwaye ke nabo, ngokokude banciphise amandla okumelana nengqondo yakhe, kunye neeathom zomzimba wakhe. kude kufike ukubonakala kwezi ngcinga, iimvakalelo, iimvakalelo kunye nokuphembelela, inamandla kunye noloyiko olungachazekiyo lwentlekele. Iingcamango ziqokelela, ziqinisa, zenza ikhrimu kwaye zibe ziimpawu zomzimba, iintshukumo kunye neziganeko, kubomi bomntu kunye nobesizwe. Kuza ke ngokukhawuleza utyekelo olungalawulekiyo lokufuna ukuzibulala, ukubulala, ubusela, inkanuko, kunye nezenzo zobubele zequbuliso nokuzincama. Kuza ke ukungalawuleki komoya wobumnyama, woburharha, ububi, ukudimazeka, ukuthandabuza nokungoyiki. Kuza ke ukuzalwa kweli lizwe sinobubele, isisa, uburharha, okanye ukuthula, kunye nabachasene nabo.
Umntu ucinga kwaye ubume bendalo baphendula ngokumangalisa iingcinga zakhe kumlo wokuqhubekeka ngelixa bejonga ngamehlo amangalisayo, bengakhumbuli obangela. Umntu ucinga ngokuthanda inkanuko, umona kunye nomsindo, kunye neempuphu kunye nokukhululwa kwendalo kunye nomntu odibana naye. Umntu ucinga kwaye uqinisa indalo ngokwengcinga yakhe, kwaye indalo ivelisa inzala yakhe kuzo zonke iintlobo zezinto eziphilayo njengonyana weengcinga zakhe. Imithi, iintyatyambo, amarhamncwa, izinto eziphindaphindiweyo, iintaka, zikwimo yazo kukukrala kweengcinga zakhe, lo gama kwisimo ngasinye esahlukileyo kuboniswa kwaye kukhethekileyo kwenye yeyona minqweno yakhe. Indalo iphinda ivele ngohlobo olunikiweyo, kodwa ingcinga yomntu imisela uhlobo, kwaye udidi lutshintsha kuphela ngengcinga yakhe. Amantshontsho, iimvana, iipikoko, iimbaleki, namahobe asendle, aya kuqhubeka ukubonakala lo gama umntu eya kuthi abalinganise ngokwengcinga yakhe. Izixhobo ezifumana ubomi kwimizimba yezilwanyana kufuneka zibe nobume bazo kunye nefom emiselwe yingcamango yomntu ade ngokwazo akwazi ukucinga. Ke abasayi kuludinga uncedo lwakhe, kodwa baya kuzakhela iifom zabo njengoko ingcinga yomntu ngoku eyakhe eyakhe neyabo.
Njenge-lemniscate, umntu umi kwihlabathi le-noumenal kunye nelize. Ngaye isixhobo sahlula-hlula njengomoya-nto kwaye senzeka kweli lizwe lomzimba kwiimeko zalo ezisixhenxe ukusuka kwimo ukuya kwinto. Ngomntu, omiyo kwiziko, ezi meko zisixhenxe ziyahambelana kwaye ziphinde zibe yinto. Ngumguquleli owenza ifom yokungabonakaliyo xa eyicacisa kwaye eyiqinisa-ngokucinga. Utshintsha into eqinileyo ibe yeyokungabonakaliyo kwaye iphinde ibonakale - ihlala icingwa. Ke uyaqhubeka kwiinkqubo zakhe zokutshintsha kunye nokucoca, ukudala kunye nokunyibilikisa, ukutshabalalisa nokwakha imizimba yakhe, izilwanyana kunye nemifuno yehlabathi, iimpawu zezizwe, imozulu yomhlaba, ukubonakaliswa kwamazwekazi aso, ubutsha bayo kunye nobudala nolutsha kuyo yonke imijikelezo-soloko ucinga. Ke ngokucinga uthatha inxaxheba yakhe kumsebenzi omkhulu wokutshintsha umba de ube nguConsciousness.